ဟာလန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး မှန်းချက်နဲ့နှမ်းထွက်မကိုက်ခဲ့တဲ့ ဘာကာ – Myan Sports
ဟာလန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး မှန်းချက်နဲ့နှမ်းထွက်မကိုက်ခဲ့တဲ့ ဘာကာ
ဘာစီလိုနာအသင်းဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၉ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလတုန်းက အသက် ၁၈ နှစ်အရွယ် အာလင်းဟာလန်းကို ခေါ်ယူဖို့ အခွင့်အရေးကို ပယ်ချခဲ့ပြီး ကီဗင်ပရင့်စ်ဘိုတန်ကိုသာ အငှားနဲ့ ခေါ်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။
DORTMUND, GERMANY – SEPTEMBER 19: (EDITORS NOTE: Image has been digitally enhanced.) Erling Haaland of Dortmund celebrates after winning the Bundesliga match between Borussia Dortmund and Borussia Mönchengladbach at Signal Iduna Park on September 19, 2020 in Dortmund, Germany. (Photo by Lars Baron/Bundesliga/Bundesliga Collection via Getty Images)
ဟာလန်းဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ ၁၈ လအတွင်း ကမ္ဘာပေါ်က အကောင်းဆုံးထိပ်တန်းလူငယ်ကြယ်ပွင့်တွေထဲက တစ်ဦးဖြစ်လာခဲ့သူဖြစ်ပြီး လက်ရှိမှာတော့ ဒေါ့မွန်အသင်းအတွက် ကစားပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဟာလန်းအနေနဲ့ နူးကမ့်မှာ ကစားဖို့ အခွင့်အရေးရခဲ့ပေမယ့် ဒါရိုက်တာဟောင်း ဇေးဘီးယားဘော်ဒက်စ်က ဘာစီလိုနာအသင်းဟာ ဆဲလ်ဘတ်အတွက် ကစားပေးနေတဲ့ နော်ဝေကြယ်ပွင့်ကို မခေါ်ယူချင်ခဲ့ဘူးလို့ ထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ဘာကြောင့် အသက် ၂၀ အရွယ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ ဟာလန်းကို ခေါ်ယူမှု မပြုလုပ်ခဲ့တာလဲလို့ မေးမြန်းခဲ့တဲ့အခါမှာ ဘော်ဒက်စ်က Mundo Deportivo ကို အခုလိုပဲ ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
“ဘာလို့လဲဆိုတော့ သူက ဘာကာကစားသမားမဟုတ်ဘူးလို့ ကျွန်တော့်ကို ပြောခဲ့လို့ပါ”
“ဘာတိုမြူက နည်းစနစ်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွင်းရေးမှူးကို လစ်လျူရှုထားတယ်ဆိုတာ ကျွန်တော် နားလည်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အမှန်တရားက ဒီလိုကစားသမားတွေက ရောက်လာပြီး သူတို့ ဘယ်လိုစွမ်းဆောင်ရည်မျိုး ပေးမလဲဆိုတာ ခင်ဗျား မသိနိုင်ဘူး”လို့ ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ဘိုတန်ဟာ ဇန်နဝါရီအပြောင်းအရွှေ့ကာလမှာ ဘာစီလိုနာကို ရောက်ရှိလာခဲ့ပြီး ၆ လအတွင်း ၄ ပွဲသာ ပါဝင်ကစားပေးခဲ့ရပြီးနောက် ဖီအိုရင်တီးနားအသင်းကို ပြောင်းရွှေ့သွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဟာလန်းကတော့ ယခုရာသီမှာ ၁၀ ပွဲကစားပြီး ၁၀ ဂိုးအထိ သွင်းယူထားနိုင်တာကြောင့် ဘာစီလိုနာတို့ရဲ့ တွက်ကိန်းက လွဲခော်သွားခဲ့ပြီလို့ ဆိုရမှာပါ။
Previous Article မယုံနိုင်ဖွယ် ဂိုးစည်းပေါ်က ဖျက်ထုတ်မှုကြောင့် ချီးကျူးခံနေရတဲ့ လူကာကူ
Next Article လေဆိပ်မှာ အိပ်ခဲ့ရပြီးနောက် အိမ်ရှင်ဂမ်ဘီယာကို ရှုံးနိမ့်ခဲ့တဲ့ ဂါဘွန်